Ahoana no ahafahanao mamorona kitapo fatoriana mba hamaritana ny tahan'ny mari-pana?
Rehefa manana malemilemy na RFQ ho an'ny kitapo fatoriana ianao, saingy tsy misy tombantombana ny mpanjifanao, dia afaka manome anao takiana amin'ny mari-pana ho an'ny kitapo hampiasana na inona ny fampiasana azy izy ireo. Ahoana no ahafahanao mamorona kitapo mifanaraka amin'ny tanjona?
Inona no mety ho lafiny lehibe indrindra momba ny mari-pana?
Izy io dia ahitana ny endrika mamiara, endrika valopy ary valopy misy fonony. Ny endrika mamy dia tsara raha mahatratra ny tahan'ny hainganana ambany, malalaka ny endrika ao amin'ny valopy, saingy sarotra ny manakatra ny hafanana be loatra. Ny valopy miaraka amin'ny kaontaly dia toy ny tsy fahita sy mahazo aina toy ny valopy, ary tsara kokoa noho ny valopy mba hahatratrarana ny mari-pana ambany, fa tsy tsara toa an'i mama amin'ny fatrany ambany.
Izahay dia manondro ny fananganana insulation sy fananganana hafa.
· Mametaka 1 fotsiny. Ity fanamboarana ity dia mahazatra amin'ny kitapo fahavaratra na kitapo fatoriana mandritra ny vanim-potoana 3.
· Fananganana roa sosona, izay ampiasaina indrindra amin'ny famoronana kitapo fatoriana ho an'ny fampiasana ny hatsiaka. Araka ny zavatra iainantsika dia mandeha tsara. Kitapo matory ara-tafika miaraka aminy
Fananganana roa sosona.
· Takelaka telo na mihoatra, ahafahantsika mahatratra ny mari-pana ambany indrindra, azontsika atao ny manao kitapo fandriana 4 takelaka indrindra hatreto.
· Ny fehin-kibo mafana dia apetraka matetika eo an-tampon'ny kitapo fatoriana hikatona rivotra mafana ao anaty kitapo.
Ampiasaina amin'ny kitapo matory mummy sy sobika fatoriana fatotra izany.
· Matetika ny fofona rivotra no amboarina amin'ny sisin-tany mba hisorohana ny hatsiaka hiditra ao anaty kitapo amin'ny nify zipper.
· Manorata kofehy mba hikatona ilay fisaka kely kely araka izay azo atao.
· Tsy misy kodiarana eo amin'ny akoroka mba hisakanana ny rivotra tsy ho avy amin'ny lavaka fanjaitra.
· Nivoatra ny "efitrano indroa" hanakanana ny rivotra hamaky ny lavaka fanjaitra. Jereo azafady ireo FAQ. https://www.greencampabc.com/faqs/
Ny fitaovana inona no hampiasaina amin'ny kitapo matory dia misy ezaka be atao amin'ny vidiny mandefitra. Anisan'izany ny insulation & shell ary lining.
Amin'ny ankapobeny, misy karazany roa fitaovana ampiasaina ho an'ny insulation ho an'ny kitapo fatoriana. Ny iray dia voajanahary fibre, ny iray mihena. Mety hahatratra ny ambany ambany noho ny fibre artifisialy mifototra amin'ny habe mitovy. Ny fibre artifisialy samihafa koa dia manana fampisehoana samihafa.
Mofom-bary & lamba lining
Ny kitapo fahavaratra dia matetika mampiasa lamba matevina sy kitapo amin'ny hatsiaka matetika dia manana lamba malefaka sy malefaka, izay tsara ihany koa mba hitafana.
Misy fenitra iraisam-pirenena hamaritana ny tahan'ny mari-pana amin'ny kitapo fatoriana?
Misy fenitra iraisam-pirenena roa, EN ISO13537 & EN ISO23537. Ny EN ISO13537 dia noforonina voalohany, ny EN ISO 23537 no dikan'ny fanatsarana. Ny EN ISO13537 & EN ISO23537 dia tena mitovy amin'ny ankapobeny ary samy mahay ny roa tonta ireto. Ny EN ISO23537 dia manana ny antsipiriany bebe kokoa momba ny tontolon'ny fitsapana. Ny famoahana farany farany indrindra ho an'ny fenitra 2 dia ISO13537-2012 & ISO23537-2016. Amin'ireo fenitra roa ireo dia azontsika atao ny mamaritra ny fiheveran-tena amin'ny fomba mahomby Fa maninona no somary tsy mitovy izy ireo, satria ny olona samy hafa tsy mitovy. Ary mba hamaritana ny fenitra iraisam-pirenena, misy ny lafiny sasany tsy dia mitombina, toa ny fomba fitsapana, ny valopy sy ny mummy.
No 168-3, lalana Qingyang Avaratra, Changzhou, faritanin'i Jiangsu, Sina
3600pcs kitapo fatoriana 3 vanim-potoana vonona ho an'ny ...
Fomba iray hanaronana ny trano-lay pop-2 rehetra
Fomba iray hamoritana ny tranolay mipoitra rehetra